Loharano mafana Banjar " Journey-Assist - Mahaliana any Bali
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Loharano mafana Banjar
Hot Springs Banjar (Air Panas Banjar)
Loharano mafana Banjar. Lovina. Bali
Banjar Hot Springs Review
Any avaratr'i Bali (distrika Lovina), ireo loharano ireo no be pitsiny malaza eto amin'ny nosy (na dia tsy izy irery aza). Fantatry ny mponina eo an-toerana izy ireo nandritra ny taonjato maro, fa ny fotodrafitrasa teto dia vao nanomboka ny taona 1940. Tamin'izany no nandalinana ny vokatry ny fitsaboana amin'ny rano, izay manankarena amin'ny solifara. Ankehitriny dia malaza amin'ny vahiny sy ny Bali ity toerana ity.
Endri-javatra sy fananana ilaina
Ny rano mikoriana avy amin'ny tsinain'ny tany dia misy mineraly marobe ary nafanaina hatramin'ny +37, noho izany dia levona sy voadona tsara ireo microelement ao aminy. Manjaka eo amin'izy ireo ny solifara, mahatratra 26% ny atiny. Misy fofona sulphide hidrogen any akaikin'ny loharano, manamarina ny fihaviany voajanahary.
Ho fanampin'ny solifara, ity rano ity dia misy:
Radon (gazy tsy mitongilana manana toetra radioaktifa malemy).
Ny be pitsiny amin'ireo singa ireo dia misy fiatraikany tsara amin'ny vatana.
Ao amin'ny faritry ny loharano mafana an'i Banjar dia misy dobo filomanosana 3 lehibe ho an'ny besinimaro sy dobo tsy miankina 2. Ao amin'izy ireo ny rano dia mikoriana avy amin'ny loharanon'ny tendrombohitra amin'ny alàlan'ny fantsona. Vato volkanika ny rindrin'ireny dobo ireny. Ny rindrina dia voaravaka sarina nagas - biby mahafinaritra avy amin'ny angano eo an-toerana.
Misy ihany koa ny tolotra fanorana sy fitsaboana spa maro samihafa.
Misy trano fisakafoanana eo amin'ny faritry ny loharano
adiresy: Banjar, Buleleng - Bali
Kaody postaly: 81152
telefaonina: +62 362 - 92901
Vidin-javatra. Vidiny hitsidihana
Fidirana amin'ny pisininam-bahoaka (aorian'ny fandoavam-bola dia afaka mijanona ao mandritra ny andro ianao): ho an'ny olon-dehibe - 20 000 rupees, ho an'ny ankizy - 10.
Fampiasana pisinina manokana: olon-dehibe 15 rupees isan'ora, ankizy 000.
Alatsinainy - 8.30 - 17.30
Talata - 8.30 - 17.30
Alarobia - 8.30 - 17.30
Alakamisy - 8.30 - 17.30
Zoma - 8.30 - 17.30
Sabotsy - 8.30 - 17.30
Alahady - 8.30 - 17.30
Sary loharano mafana Banjar
Loharano mafana Banjar (Air Panas Banjar). Dobo filomanosana ampahibemaso
Loharano mafana Banjar (Air Panas Banjar). Pools
Loharano mafana eo amin'ny sari-tany
Fitsangatsanganana Paleo any Moskoa, Rosia.
Angel / fanehoan-kevitra amin'ny fitsangatsanganana Paleo-tany Mosko, Rosia. tsy misy
na ny lokon'ny rano, na ny habetsahan'ny olona, ​​dia tsy mitaona ny fahatokisana an'io loharano io ho fanasitranana, fa tsy areti-mifindra)